Miara-miasa amin’ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena EISA izay vatsian’ny tetikasa SACEM vola izy ireo. Ny tanjona dia ny hampihena ny tahan’ny vato maty sy ny vato fotsy. Ankoatra izay dia ezahina ihany koa ny fampiakarana ny tahan’ny mpifidy amin’ity fifidianana fihodinana faharoa ity mihoatra ny tamin’ny fihodinana voalohany. Araka izany dia tena fanohanana ny asan’ny vaomiera mahaleotena mikarakara ny fifidianana (CENI) no ataon’izy ireo amin’izao hetsika fanentanana faradoboka izao. Ankoatr’izay dia nisy ny fanaovana «caravane » nitety faritra maro tahaka an’Ambohijatovo, Ankorondrano, Manjakaray hatreny Andohalo nandresen-dahatra ny olom-pirenena haneho ny safidiny. Mbola hitohy ny hetsika anio ary hiezaka handrakotra ny faritra izay tsy mbola nolalovana omaly izy ireo amin’ny alalan’ny fizarana taratasy kely fanazavana (flyers) sy ny firesahana mivantana amin’ny tsirairay.